Jackpot Cleopatra's Gold Deluxe wetara nnukwu mmeri - pisklak.net
Jackpot Cleopatra’s Gold Deluxe wetara nnukwu mmeri
Otun’ime egwuregwu kachasị amasị onye ọkpụkpọ ugbu a abatala na 21st narị afọ. Jackpot Cleopatra si Gold Deluxe egwuregwu na-ewetara a oge that a anya na-emelitere egwuregwu imewe. N’otu oge ahụ, oghere that a na-ejigide atụmatụ ndị pụrụ iche nke egwuregwu mbụ ahụ nyere. Ma n’ezie, ọ bụ ebube – jackpot na-aga n’ihu!
Jackpot Cleopatra si Gold Deluxe N’ozuzu
Dị ka egwuregwu mbụ, Cleopatra bụ akara ngosi kachasị mkpa nke na-enye gị ọtụtụ atụmatụ dị ukwuu t 5 reels. Ndị na – eme ọtụtụ ihe egwuregwu, egwuregwu efu nwere 3x multipliers, yana jackpot un – aga agan’ihu un – aga agan’ihu bụ ihe ị ga – atụ anya inyere gị aka imeri nnukwu.
Nnukwu eze ukwu, Cleopatra, na-arụ ọrụ dị ka Anụ ọhịa na ndị nọchiri anya akara ndị ọzọ niile belụsọ Pyramid gbasasịa. Nrite ndị ọzọ karịa jackpot na-aga n’ihu okpukpu abụọ mgbe otu ma ọ bụ karịa Cleopatra pụtara na ngwakọta mmeri. Ihe omuma that a ghacha bu Pyramid ma gbasasia ndi ozo na agbakwunye na mmeri. A na-eme ka mmeri na-agbasasị gbasaa website Id ngụkọta nzọ.
Nnukwu ihe nrite nke oghere that a bụ jackpot na-agan’ihu nke meriri mgbe akara 5 ọhịa na-eme na payline.
Ezigbo ndị mmadụ si RTG only oghere ọzọ d e egwuregwu efu ma ị ga – ebute atụmatụ a mgbe akara ngosi 3 ma ọ bụ karịa ga – apụta ebe ọ bụla. Rewardgwọ ọrụ gị ga-abụ egwuregwu 15 n’efu. N’oge atụmatụ a, ihe mmeri niile dị okpukpu atọ, belụsọ jackpot. Njirimara a nwere ike ịmegharị. Egwuru egwu n’efu na-egwuri egwu na nzọ nke na-akpali akpali ma na-enweghị ike ịgbanwe nzọ ahụ. Mgbe ịmechara egwuregwu niile na – enweghị ihe ngosi ọkọlọtọ ga – egosipụta mmeri gị niile enyere na atụmatụ a.
Irughari website Id Naịl dị ka ụwa nke akụ na ụba na akụnụba na-echere gị!